Isithombe scariest zomhlaba. Kakhulu "esibi" isithombe
Akubona bonke abaculi ukhethe wokuveza ekumeni kanye namathafa. Ezinye afuna ukudlulisela ezithombeni zakho uhlobo imfihlakalo, zemfihlakalo, umuzwa yokwesaba. Ngokwesibonelo, ubunzima obukhulu esithombeni izwe ukuthi kuletha usizi olungapheli bonke abasebenzisi Internet, izithombe nge ezidumile onesihloko esithi "Izandla phikisa him." Lena Umdwebo awful ngempela wadala kwanyakaza okunjalo ababemzungezile, abaningi babemesaba u ngisho ukubheka kuye ngokusebenzisa esibukweni, becabanga ukuthi uqalekisiwe. Ithi, uma umculi phezu yokudweba zonke ngakimi amnyama komphefumulo kanye obumnandi esibi kunazo. Nokho, konke kabanzi ku-athikili yethu ezithakazelisayo.
"Izandla kuyaphikisana ke." Fiction noma kuqalekiswe ngalo?
Lesi sithombe esabekayo ababethi 1972 ngomculi bodumo Bill Stoneham. Ibonisa intombazane efana unodoli, futhi umfana iminyaka engaba ngu-5 ubudala. Izingane ukuma isizinda umnyango ingilazi, okuyinto kungabonwa isibalo esikhulu sezithunjwa izandla amancane.
I esibi kunazo esithombeni emhlabeni okuye kwabhalwa ne izithombe zezingane umdwebi. Stoneham ukuboniswa yena eminyakeni 5 ubudala futhi umakhelwane ntombazanyana.
Lokho umculi ayefuna ukusho?
Ngokusho Stoneham, umnyango lutho kodwa udonga phakathi kwezinto eziphilayo zemvelo nezwe parallel amaphupho. Boy on ngendwangu okubonisa okubi futhi bangajabuli. Futhi akumangalisi, ngoba efuna ngempela ukuvula umnyango ubone ukuthi kuyini ngale emhlabeni wangempela. Kodwa izandla zezingane baphikisane, ivimbe indlela eya kulo mfana. Doll imi eduze elingenalutho futhi engenangqondo. Akazange ubone noma uzwe, kodwa nguye kuphela kuleli cala, esingasiza umfana ukuthola ezweni lamaphupho.
Yiziphi izindaba horror elihlobene ne-sithombe?
Umnikazi lokuqala "Hands baphikisane" kwaba edumile nomdlali wamabhayisikobho waseMelika Dzhon UMarli. Emva kwezinsuku eziningi yafa indoda. Akekho namanje akazi ukuthi unecala ngokufa kwakhe ngempela iphethini ngeshwa. Kwenzeka into efanayo nabanye abanikazi imidwebo ezingaqondakali. Uma oluphethe lesi sithombe macabre womkhaya osemncane kutjelwa izinto ezimbi ezenzeka emakhaya abo. Bathola indwangu endaweni landfill kanye nomunye inqwaba izinto ezingafuneki. Yajabula, inhloko umndeni wamthatha endlini futhi ibekwe lusendaweni ebonakala kahle. Ebusuku, nendodakazi yabo encane bona bagijimela lokulala kubazali bakhe ememeza egumbini lakhe ngaphakathi e ukuxabana ezinye izingane. Ngosuku olulandelayo futhi wathi isithombe esithombeni ishintshile kancane - izingane ngaphandle emnyango glass. Ngemva kwalokho, uyise wanquma ukuqeda le "isiqalekiso" zendalo zibonisa ukuhlakanipha.
Ngo-2000, isithombe ngendwangu liyavela inthanethi endalini site. Abalawuli waxwayisa abasebenzisa i-Internet ukuthi lokhu isithombe esibi kakhulu emhlabeni, ngoba izithombe nge-analog uqalekiswé blade 'Izandla phikisa him "ukuthi ulilethele usizi kubantu abaningi kakade. Nokho, abaningi eduze ukubuka isithombe, okubonisa ilukuluku kwakhe okungenamkhawulo. Futhi emva kwesikhashana ku ikheli imeyili umlawuli waqala nokwamukela izincwadi okubonisa ukuthi ngemva kokubuka le "Kuyishwa" ngomfanekiso abaningi baba isiyezi.
Naphezu incwadi esibi, isithombe okubi kakhulu namanje wadayiswa. aphethe wakhe kwaba ngokugqamile umnikazi yobuciko okuthiwa uKim Smith. Ngemva kwesikhathi esithile, ikheli lakhe futhi waqala ukuthola izincwadi, eyasho okulandelayo ukuthi isithombe esibi kunazo. Smith yanikeza ngisho amasevisi izangoma owaziwa owathembisa ukukhipha amadimoni namademoni le imidwebo esabekayo. Kuze kube manje, isiphetho Umdwebo alwaziwa.
Ukudweba "Ukukhala Boy" eyabhalwa ngomculi Italian Giovanni Bragolina. Abantu abaningi babheka izithombe kwi-inthanethi, osho ukuthi lokhu kuyinto isithombe esibi kunazo le planethi, lapho engake ngayibona.
Kukhona izinguqulo eziningana lo mbhalo. Eyokuqala uthi umculi wazala indodana encane 4 ubudala. Lo mfana kwaba bebathukwe lomlilo vsogo ukuthi lihlotshaniswa kakhulu. Rumour uye kusolakala ngomlilo Giovanni ngokuqondile ukufanisa waletha ingane ubuso kukholakale kakhudlwana ukuba liyobamba yonke intukuthelo yakhe nokwesaba. Rumour has it ukuthi umntwana ngenxa it is ngakho wazonda uyise abanonya zashaya sengathi ushise. Ngemva kwesikhashana, umfana wabulawa i-pneumonia, bese Kungazelelwe kwaba khona umlilo studio kayise. Umlilo incinerated konke endleleni yayo. indwangu abephule. Akumangalisi ukuthi "Ukukhala umfana" - kuyisiqalo esibi kunazo zonke esithombeni emhlabeni, emehlweni okuyinto shudders eziningi inhliziyo.
Kamuva, kulo lonke elaseNgilandi wathatha uchungechunge okungalindelekile imililo lapho abantu abayinani elingavamile bafa. Isimanga ukuthi kungase kuzwakale, kodwa wonke amakamelo babe imisebenzi Giovanni, ngubani abephule ngokuphelele. Abantu babecabanga ukuthi la isipoki yomntwana olimalayo, ehlasela ngendwangu, wanquma izoziphindiselela emhlabeni wonke. Kuyaziwa ukuthi esibi kunazo esithombeni izwe namanje ekujabulisayo eziningi enganakile. Lokho kokwesaba, lokubonakala emehlweni kancane, uma lutho povinnogo umfana ngeke kukhohlakale. Original "umfana Ukukhala" ayitholakalanga.
"Red Dragon" uWilliam Blake
Omunye abaculi impikiswano kakhulu futhi izimbongi ezikhathini zanamuhla zaveza lesi sithombe, ukuthola oluvela Encwadi YesAmbulo. Umdwebo uWilliam kuvezwa uSathane ngokwakhe, eyabonakala kuye ngamaphupho.
Umbhali ephethwe ukuveza kukholakale yinkosi ngokwanele ebumnyameni. Abantu abaningi ngaleso sikhathi engazange aphakamisele phi khonondo yokuthi umculi kungenzeka ngempela ukuhlangabezana noDeveli ngokwakhe amaphupho akhe.
"I Scream" Edvarda Munka
Njengoba wabhala in idayari yakhe siqu umculi yena kusenzo ngokudweba imizwa abangu yake. "Scream" is ngokungangabazeki kufakwe ohlwini "izithombe kakhulu ezimbi". Art Gallery ebamba ngaphakathi kwezindonga zawo kuyinto umdwebo okwesabisayo itholakala Oslo (Norway) futhi njengoba National Gallery ezaziwayo.
Ososayensi abaningi banomuzwa wokuthi Munch kwaba ngokwengqondo umuntu okungenakho ukulinganisela, ngoba esinjalo singamane zibonisa abantu abanezifo ezibucayi isimiso sezinzwa. Umbhali wadala zabalingiswa nalokhu, okuyinto, njengoba kushiwo, yahlupha kuye iminyaka eminingi.
Abaningi bakholelwa ukuthi isithombe esibi kakhulu emhlabeni - ". Scream" prototype ka Bambalwa abantu bazi ukuthi le yokuqala ezidumile kuye kwabangela ukufa kwabaningi. Abanikazi le imidwebo macabre kusolakala idluliselwe ezifweni ezimbi noma abe yizisulu kwethuba lokuba kwenzeke inhlekelele esabekayo.
"Venus nge Mirror". Diego Velaskes
Kunezinye izithombe okubi kakhulu kanye nemifanekiso, njengokuthi "Venus nge Mirror", ebhalwe umculi Diego Velaskesom.
Kunengqondo lutho Umdwebo esivelele luye ilethe usizi umnini wayo.
Rumour has it ukuthi ubani atholwe isithombe Day ngokushesha zonakale futhi usufa ngenxa isifo esibulalayo. Yingakho "Venus nge Mirror" isikhathi eside asikwazanga ukuthola aphethe unomphela. Ngo-1914, endaweni yesehlakalo esibi kunazo labhujiswa, ummese wakhe usike owesifazane ongaziwa.
"Saturn oshwabadelayo iNdodana Yakhe" Fransisko Goyya
umculi Spanish edwetshwe isithombe sakhe uhlamvu wasenganekwaneni ngokuthi Kronos, ababesaba ukuthi indodana yakhe siqu ngabe ukugumbuqela, futhi ngokuphuthumayo abashwabadela nenyama yezingane zabo. Njengoba yaziwa, umlobi wadala salo mdwebo ucasukile. Kwavele lenqwaba izifo, Goya Uzame uthele konke ukuhlupheka kwabo nobuhlungu ku-canvas.
"Nightmare" UHenry Fyuzelli
"Nightmare" - kuyinto umsebenzi umculi odumile IsiZulu uHenry Fyuzelli. Ukudalwa umbhali uthambekele kakhulu nezimfihlakalo futhi imfihlakalo. Abantu ababuswa yilo hulumeni lapho ethathwe izinganekwane nezincwadi (ikakhulukazi Master ukuboniswa Shakespeare).
I "nightmare" Fyuzelli ukuboniswa kwakukhona owesifazane olele equlekile phezu kwesifuba okuyinto ihlala incubus (idemoni, ekhaphela nobulili abesifazane abangashadile). UMdwebo ke uzimisele futhi enwetshiwe. ungabona ikhanda eyeless ehhashini, elimelela idemoni okuqukethwe e amakhethini.
Isithombe Zdzislaw Beksinski
umculi Polish Zdzislaw Beksinski ngokuvamile kuvezwa izithombe ukufa nabantu sikhubazekile, izimpi, imihlaba kokuquleka, Apocalypse, futhi usizi okuphakade. Ithi, uma ku-canvas zokugcina umculi ukuboniswa kokufa kwakhe. Lo mdwebo umzimba lomuntu egwaziwe. Okunjalo esibi isiphetho kwamehlela nomculi. Wabulawa indodana Usigaxamabhande ngoba Zdzislaw ayenqabe ukumnika wona Ngaboleka imali.
UTeodor Zheriko futhi "ikhanda elinqunywe"
Ukuze imisebenzi yakhe umculi esetshenziswa esitho bangempela, elisesifundeni morgue. Ngakho-ke, akumangalisi, ubuka isithombe, abaningi bangase baphikise ukuthi isithombe amakhulu kakhulu emhlabeni.
Umdwebo like isiponji, ubamba wonke imizwa emihle nemibi umdwebi. Ngizizwa saba, intukuthelo negative - konke lokhu ngokuqinisekile nomthelela ku-canvas. Lokhu kwenzeka kuzo zonke imidwebo efakwe kulesi sihloko. Ngababuka, siyaqonda isiphetho nzima wajaha kanjani umculi ngamunye.
Rednecks - ukuthi ungubani na? Lisho ukuthini leli gama isitsotsi?
Umlingisi Roman Ognev Bonisa Komkhaya
Usuku usosayensi yenuzi - iholide professional eRussia futhi Kazakhstan
Cataract - a ingaphazamisi we-cornea. Izimbangela Nezingozi Ukwelashwa
Imigomo ukuhweba kwezimpahla ezithile
I-Middle East kanye nezici zabo
Incembe polyanthous: incazelo izinhlobo, ukutshala nokunakekela
Ifilimu evikela i-iPad: kanjani ukusindisa isikrini sedivayisi
Uqweqwe Umkhiqizo wobisi: iresiphi
Battle - lena esibandakanya mncintiswano yomphakathi noma yamasiko abantu zokudala?
Hoover ukwakhiwa bagless: Izibuyekezo nezeluleko okukhetha
The best umculo abadlali-Windows